We Fight We Win. -- " More than Media ": တေဇ ရဲ့ စကားတခွန်း
တေဇ ရဲ့ စကားတခွန်း
အမကြီး ကျနော်လေယဉ်ပျက်ကျလို့ သေမလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ လောကကြီးအကြောင်းကိုသိသွားပြီ။
ဘ၀ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါလား ဆိုတာ ။ ကျနော်အမကြီးနဲ့ တွဲ ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်
အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ - တေဇ
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ ဆုံစဉ်က တေဇ ပြောခဲ့တဲ့စကား)
U Tayza is very smart and that's why he is wealthy. He is an ideal person.
we don't have any more trees for you tay za.
how will you pay back for our people you cut outalot tress and related all other effects?
တော်ရုံသာပြောပါ နှဲးသမားလေးရယ် လေတွေနည်းနည်းလျှော.ကွယ်
သောက်ပို မလုပ်နဲ့ ။ တကယ်လုပ်မယ်ဆို ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ တဝက်ဘဲ ဒေါ်စုကိုလှုပါ။
If he say so , we shall welcome him .
Oh! Mg Tay Za, whatapity! OK don't forget the life is more than that cut, clear the tree (teak) and sell to abord with lower price...
Bill Gates and Waren Buffet donates about 50-80% of the their posessions respstively and how much of u MG TAY ZA?.I THINK '''''' blah blah blah '''
Bill Gate and Warren Buffet are environmental friendly.They are rich not by chance,Neither crony nor carpet bagger.But YOU.It is2b ashamed of such speaking.